सिर्जना बराल – Himalaya Television
जाडोसँगै हिटर र गिजरको प्रयोग बढ्दो, सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ मंसिर २०७८ काठमाडौं । चिसो बढेसँगै शहरी तथा ग्रामीण भेगमा ग्यास गिजर र विद्युतीय हिटरको प्रयोग बढ्दै जान्छ । चिकित्सकहरुले भने ग्यास गिजर र विद्युतीय हिटर प्रयोग नै नगर्न सुझाएका छन् । जाडो मौसममा पानी तताउन र कोठाहरु...
मुटुरोगको मुख्य कारण : धुमपान (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ मंसिर २०७८ काठमाडौं । मुटुरोग विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने रोगको शीर्ष स्थानमा छ। सन् २००७ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा पनि हृदयघात मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । धुमपान सेवनले हृदयघातका बिरामीको संख्या अझै बढाएको तथ्यांक छ...
दलहरुका कार्यक्रमले सामाजिक दूरीको खिल्ली उडाउँदा काेराेना जाेखिम बढ्दो (भिडियो रिपोर्टसहित)
१० मंसिर २०७८ काठमाडौं । चितवनमा १० औं एमाले महाधिवेशन जारी छ । ७७ वटै जिल्लाबाट महाधिवेशनका लागि कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी, शीर्ष नेता लगायत चितवन पुगेका छन् । महाधिवेशनका कारण चितवनका सडक, चोक लगायत सम्पूर्ण स्थानमा भिडभाड बढेको छ ।...
८ मंसिर २०७८ काठमाडौं । धैरैले सामान्य रुपमा लिने गरेको चिसो मौसम स्वास्थ्यका लागि भने जोखिमयुक्त छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई चिसो मौसममा झनै समस्या हुन्छ । चिसो मौसममा जोखिमपूर्ण समूहमा रहेका व्यक्ति कसरी जोगिने त ?...
काठमाडौंमा जामैजाम, ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ मंसिर २०७८ काठमाडौं । पछिल्लो समय सवारी जामका कारण सडकमा घण्टौं बस्नु पर्ने बाध्यता छ । सवारी जाम बढ्दै जाँदा नागरिक आक्रोशित छन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । लाखौं सवारी साधन चल्ने...
एमआरपीलाई विस्थापन, ई–पासपोर्ट वितरण शुरु (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ मंसिर २०७८ काठमाडौं । आजदेखि नेपालमा पनि ई–पासपोर्ट वितरण शुरु भएको छ । सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)लाई विस्थापन गरेर ई–पासपोर्ट वितरण शुरु गरेको हो ।
बिहीबार राष्ट्रपतिको विवरण संकलन गरी जनगणनाको शुभारम्भ गरिँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)
२४ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रत्येक १० वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना भोलिदेखि शुरु हुँदैछ । भोलि बिहान साढे ९ बजे राष्ट्रपतिको विवरण संकलन गरी जनगणनाको शुभारम्भ गरिनेछ । कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म जम्मा १५ दिनको अवधिमा...
फूलैफूलको पर्व तिहार : लक्ष्मी पूजाको दिन जे देखियो (भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । फूलहरुको पर्व तिहार । घर आँगन फूलैफूलले सजिएका छन् । अनि बजार पनि फूलमय भएको छ । तिहार अन्तर्गत लक्ष्मी पूजाको दिन कस्तो देखियो त काठमाडौं ।
जलवायु सम्मेलनलाई अवसरको रुपमा लिन विज्ञको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)
१२ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि यूएन एफ सीसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुँदैछ । ग्लास्गोमा हुने २६ औं राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिलाई विशेष महत्व...
बारीभरि ढकमक फुले फूल, किसानको मनमा भने यस्तो पीर (भिडियो रिपोर्टसहित)
११ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । दशैं सकिए लगतै आउने चाड तिहारमा फूलको विशेष महत्व छ । अन्य समयभन्दा फूलको माग धेरै हुने भएकाले व्यावसायिक रुपमा फूल खेती गर्नेहरुका लागि तिहार अझ विशेष पर्व हो । तिहार नजिकिँदै गर्दा, फूल...
गाउँहरु सहरउन्मुख हुने क्रम बढ्यो तर वास्तविक सहर किन बन्न सकेन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१० कात्तिक २०७८ काठमाडौं । जनघनत्व र पूर्वाधारको विकासक्रमले देशभर सहरको संख्या थपिँदै गएको छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तनसँगै गाउँहरु सहरउन्मुख हुने क्रम झनै बढेको छ । तर यसरी सहर उन्मुख ठाउँहरु अस्तव्यस्तताले वास्तविक सहर भने बन्न सकेका छैनन्...